Carabiner isikulufa Din 5299. Izinzuzo
Manje, cishe njalo edolobheni ungabona eziningi ephezulu liphumele izakhiwo. Ngokuvamile ngalinye lala masonto amakhaya akhiwe zamakhulu, futhi ngezinye izikhathi, amakhulu amaningana izibuya. izakhiwo ezinjalo muhle ngempela futhi othakazelisayo. Kodwa namabhilidi futhi ukufihla nengozi enkulu futhi eyinkimbinkimbi ekwakhiweni nokusetshenziswa. Ukwakha i-isimangaliso amazing ezifana ngokuphepha, futhi ukuze asindise abantu ngesikhathi izinhlekelele zemvelo, kudingeka eliphezulu futhi izindlela okuhlala isikhathi eside ususondele.
Carbine Din 5299
Omunye amathuluzi eyinhloko ikhebula noma intambo. Abatakuli ukuzisebenzisa lapho ekhulula abantu, futhi abakhi - ekwakhiweni kwezakhiwo. I izintambo kukhona carbines sixhumene. Kubalulekile ukwazi ukuthi i-carbine Kwakumelwe uqine ngokwanele ukuze ugcine indoda noma cha komthwalo osindayo kakhulu.
Esinye sezipho ezinhle kakhulu efana nayo kuyinto carbine isikulufa Din 5299.
Kunezinhlobo eziningana amadivayisi: carbine umlilo Din 5299C, carbine umlilo nge bamba Din 5299D, inguqulo threaded nge bamba, a carbine izilwane (klyuchny), esetshenziselwa anamathisela leash entanyeni, amabhande ukuze izikhwama, nojosaka, kanye nohlobo 125 nge swivel isetshenziselwe izinjongo zasekhaya.
Abakhi abaqaphi njalo ukusebenzisa Uhlobo lokuqala ngezibhamu, njengoba bayashesha. Enye inzuzo ukuthi basuke ifakwe isiqhebezo ekhethekile ayikuvumeli carabiner evulekile ngesikhatsi kokuhlinzwa. It kungenziwa screwed noma othomathikhi.
Kuphi futhi kanjani ukusebenzisa ingebe Din?
Ngempela, izinto zokwakha emakethe lo mkhiqizo azikho analogue. Lokhu kuchazwe iqiniso lokuthi Din carbine isikulufa ubelokhu iminyaka eminingi, ukukhonza abantu futhi ethembekile. It is esetshenziswa cishe wonke abakhi abatakuli, futhi ikakhulukazi abasebenzi service umlilo. He is lula kakhulu ukusebenzisa. Ingakapheli imizuzu engu-carbine isikulufa ukwazi kuchunywa iyiphi inombolo sezindophi noma izintambo. Ukuxhumanisa kungenzeka njengeyunithi eyodwa, futhi lapha kwakukhona iqembu amayunithi. It uyakwazi ukubhekana naso kanye nasemathubeni nayizimfundamakhwela usebenzisa kuphela ukusonta. Carbine isikulufa ezenziwe ngensimbi engagqwali, eye ziphathwe zinc. Lolu hlobo amadivayisi akasoze nokugqwala.
Carabiner isikulufa lashukumisa futhi angase abe nemingcele ezahlukene. Ukunganakwa yalezi idatha lapho kukhethwa sokuzingela kungaholela ingabikho imiphumela emibi.
Ngobukhulu carbine isikulufa kungenzeka kusuka 4 mm kuya ku-12 mm. Ngayinye kukhona ethile umthwalo esiphezulu. Ukuze ubukhulu umkhiqizo 4 mm umthwalo esiphezulu 90 kg, 6 mm - 200 kg, 8 mm - 350 kg, 10 mm - 550 kg, futhi ngo-12 mm carbine umthwalo okungenzeka 750 kilograms.
, Intambo noma intambo Kwakumelwe uqine ngokwanele ukuze isikulufa carabiner isetshenzisiwe ngokuphepha ngangokunokwenzeka.
Umehluko omkhulu phakathi isikulufa carbine kusukela kweminye imikhiqizo efanayo ukuthi omiswe latching futhi evikelwe nut ekhethekile, okuyinto some nge ukusonta. Kodwa hhayi nje nut is some endaweni yayo: kuba ngokukhethekile kuzuba off intambo endaweni ethile. Ngeke avumele carabiner ukuvula kwenzeka ukuthi intambo ngeke ume. Leli qiniso kanye sigqamisa ukuphepha ukuthembeka usebenzisa inhlokomo isikulufa carbine.
Carabiner isikulufa lashukumisa - ngokuningiliziwe mncane impela futhi ngempela ukucasha ukuthi ineqhaza elikhulu kakhulu. Ukuze emakethe kayiwanga imikhiqizo esezingeni eliphansi, yasungulwa guest ekhethekile. Njalo umdayisi ubophekile wayifunda phambi oyifaka screw iwindi carbine. carbine Standard linamakhasi ayi-8. Inguqulo yokuqala incazelo ejwayelekile isimo yanyatheliswa ngaphezulu-January 1, 1977. Kusukela ngaleso sikhathi, le dokhumenti bekulokhu izinguquko eziningi. Ushintsho lwakamuva idokhumenti Kuye kwenziwa ama-6 th April 2015. Isikhulu inombolo idokhumenti - 7041-71.
Naphezu izinhlelo eziningi izivakashi, izidingo eziningi zokungabi carbine namanje ayizange ithuthuke. Kukhona eziningana kubo: "carbine kufanele kwenziwe ngokuqinile ngokuvumelana imidwebo eklanyelwe ngokwesayensi, ithuthukiswe evunyelwe ukuze"; "Fire carbine design kumele anikeze amandla okusezingeni eliphezulu nokwethembeka uma usebenzisa isibhamu."
Ngenxa lezi amazinga kazwelonke eminyakeni engu-30 ukusetshenziswa sokuzingela lapho ukusebenza kwe-umkhiqizo kwaba olungaphephile kuhilelani nemiphumela emibi, wayengekho. Ngenxa yezizathu ezingaziwa, ngo-2009, umphumela GOST elenziwe we carbine, bamisiwe. iminyaka eyisithupha kuphela kamuva, ngo-2015, le dokhumenti liye laba nezokusigcoba futhi.
Ngakho, esikhundleni imininingwane amancane ukucasha lula kakhulu ukusebenza amasevisi umlilo, kanye abakhi. Uma unquma ukwakha isakhiwo multi-storey, sicela uqinisekise ukuthi ukusetha ngezibhamu sokuzingela Din. Bayoba wena eside futhi enokwethenjelwa, kuyilapho ukuthatha ngokunembile ukunakekela ukuphepha kwakho nenduduzo. Intengo kungashiwo ukuthi ingaphezu okungabizi. Ukuze imali ukuthenga umkhiqizo okuthembekile uyakwazi ngokuphelele wonke umuntu. Kubalulekile ukukhumbula: lapho uthenga izimpahla ezivela umthengisi ngempela ngenkani idokhumenti ekhethekile noma ipasipoti, okuyinto ekhombise ukuthi ingebe wadabula lonke uvivinyo efanele yakhelwe lesi sinqumo. Umdayisi Kufanele ube nawo wonke amadokhumenti eqinisekisa ukuphepha izimpahla ithengiswe. Ukuqinisekisa imibhalo luyokwenza ukuba uqiniseke ekwethembekeni umkhiqizo.
Yeka umbukwane embonweni wasebusuku ukukhetha?
Nezibhengezo semiautomatic: izici, inkonzo, nenqubo yokukhetha
Ibutho elinamandla emhlabeni. Ibutho ubhedu emhlabeni
Rimfire izinhlamvu: Isimiso nekusombulula
Ubuhlungu ngesikhathi ukuchama kwabesifazane
Potpourri dance hhayi kuphela
Patrol Dubosekovo: esikhumbuzo sabantwana Amaqhawe Panfilov njengoba iwuphawu ukungawi abavikeli eMoscow
Kufanele yini ngiye eRoma ngoJanuwari? Izici, isimo sezulu, izinga lokushisa kanye nokubuyekeza
Isikhafu "Coral Summer": Izibuyekezo
Pharyngitis Allergic: izimbangela, izimpawu kanye nezici ukwelashwa
Sauna ebusweni: ukuhlanza futhi amafutha
"Traykor": analogue, ukubuyekezwa, yokusetshenziswa
"Live futhi Khumbula": lokucuketfwe kanye nokuhlaziywa. Rasputin "Live Khumbula": izinkinga
Usuku lomshado siyakuhalalisela abathandwayo
Collection "DeAgostini": onodoli Folk zokubhukuda